तराई–मधेसमा जाडो बढयो
२०७२ मङ्सिर २६ शनिबार, सप्तरी । दुई दिनयता एक्कासि बढेको बाक्लो हुस्सु र चिसोका कारण सप्तरीसहित तराई–मधेसमा जाडो बढेर जनजीवन प्रभावित भएको छ । बिहानबेलुका बाक्लो हुस्सु लाग्ने र दिउँसो कम घाम लागेका कारण सप्तरी जिल्लाको सहरी तथा ग्रामीण भेगका मानिसले जाडोको निकै महसुस गरेका छन् । जाडोको निकै प्रभाव पर्नुको साथै सहरबजारमा हिँड्नेहरुले बाक्लो लुगा लगाएर हिँडनुपर्ने बाध्यता रहेको राजविराजका सुरेन्द्र यादवले बताए । जाडोले केही स्थानमा सर्वसाधारणले जाडोबाट ... बाँकी अंश»
अखण्डतालाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी प्रदेशको सीमा हेरफेर हुदैन–मन्त्री खरेल
२०७२ मङ्सिर २६ शनिबार, काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले जनता, राष्ट्रियता र मुलुकको अखण्डतालाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी प्रदेशको सीमा हेरफेर नहुने बताएका छन् । तीनकुने सुविधानगरस्थित एकीकृत उपभोक्ता सङ्घको १२औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “नाकाबन्दी गरेर नेपाली जनताको घाँटी थिचेर प्रदेशको सीमालाई हेरफेर गर्न खोजिए त्यसलाई कुनै पनि हालतमा मान्न सकिदैन ।” हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको देशलाई त्यसैअनुरुप प्र ... बाँकी अंश»
बेनी–जोमसोम सडकमा चिनियाँ चासो
२०७२ मङ्सिर २६ शनिबार, मुस्ताङ । बेनी–जोमसोम सडकखण्डको स्तरोन्नतिका लागि चिनियाँ पक्षले चासो दिएका छन् । नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलेर २०६७ सालमा सडक विभागलाई जिम्मा दिएको ७२ किलोमिटर उक्त सडकखण्डको मर्मतसम्भार र कालोपत्रे गर्न चिनियाँ पक्षले चासो देखाएका हुन् । तिब्बतसँग सीमा जोडिएको कोरला नाकासम्म कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत सडक मार्गको पहुँच पुगेपछि चिनियाँ पक्षले नेपाल सरकारसमक्ष यस्तो चासो देखाएको बताइएको छ । सरकारले चिनियाँ पक्षलाई सडकको विस्तृत अध् ... बाँकी अंश»
सुतेकै अवस्थामा युवक जले
२०७२ मङ्सिर २६ शनिबार, झापा । झापाको दुहागढी–४ चारआलीस्थित नेपाल आयल निगमको शाखा कार्यालय परिसरमा गएराति एक युवाको आगोले जलेर मृत्यु भएको छ । निगमको कार्यालय परिसरमा रहेको पुरानो काठे घरको एउटा कोठामा शुक्रबार राति ८ः३० बजे धनकुटा घर भई काठमाडौँको कपनमा डेरा गरी बस्ने २८ वर्षीय जयबहादुर बडुवाललाई सुतेकै ठाउँमा शरीर जलेर बेहोस भएको अवस्थामा फेला पारेको प्रहरीले जनाएको छ । तत्कालै उपचारका लागि मेची अञ्चल अस्पताल पु¥याउँदा चिकित्सकले बडुवाललाई मृत घोषणा गरेक ... बाँकी अंश»
मापसेको जरिवाना बढ्यो
२०७२ मङ्सिर २६ शनिबार, इलाम । के तपाईं मादकपदार्थ सेवन गरेर सार्वजनिक सवारीसाधन त चलाउँदै हुनुहुन्न ? अब ख्याल गर्नुहोस् । पहिलेजस्तो मापसे गरेर जरिवानामा मात्र छाडिने होइन्, तपाईंलाई सार्वजनिक मुद्दा पनि लाग्दैछ । मापसे गरेर सार्वजनिक भाडाका सवारीसाधन चलाउने सवारी चालकलाई जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरी केही सार्वजनिक मुद्दा चलाउन सुरु गरेको छ । ट्राफिक प्रहरीले मङ्सिर पहिलो सातादेखि इलाममा यो प्रक्रिया सुरु गरेको हो । यो प्रक्रिया सुरु गरेपश्च ... बाँकी अंश»
पुनःनिर्माण विधेयक र संशोधन प्रस्तावबारे नेपाली काँग्रेस बैठक
२०७२ मङ्सिर २५ शुक्रबार, काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको पदाधिकारी बैठकले भूकम्प पुनःनिर्माणसम्बन्धी विधेयक र नेपालको संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावलाई एकसाथ अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । तराई मधेसको जारी आन्दोलन तथा अन्य समुदायको मागलाई सम्बोधन गर्न नेकाँ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराएको र भूकम्प पुनःनिर्माणसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुट्न नसक्दा संसद्मा पेस हुन नसकेको परिप्रेक्षमा सो बैठक बसेको हो । ... बाँकी अंश»
मोर्चाले बटमलाईन छोडेन, सत्ताधारीलाई सकस !
२०७२ मङ्सिर २५ शुक्रबार, काठमाडौं । तराई–मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने अडान लिएपछि फेरिपनि सरकार र मोर्चाबीच भएको वार्ता एजेन्डामा प्रवेश गर्न सकेन । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सत्तारुढ प्रमुख दलका नेतासहित मोर्चासँगको छलफलमा दुबै पक्षले विषयवस्तु राखे पनि आ–आफनै अडानका कारण वार्ता उपलब्धिहिन भयो । प्रधानमन्त्री केपी ओली, उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहितका सरकारी वार्ताटोली र सत्तारुढ ए ... बाँकी अंश»
२८ न्यायाधीश अलपत्र
२०७२ मङ्सिर २५ शुक्रबार, काठमाडौं । अढाइ वर्ष अघि मात्र नियुक्त भएका २८ अस्थायी न्यायाधीश पदमुक्त भएका छन् । पुनरावेदन तहका न्यायाधीशहरको पछिल्लो पदावधी शनिबार सकिँदै छ । न्याय परिषदले म्याद थप्न वा स्थायी गर्न नमानेपछि उनीहरु स्वतः पदमुक्त हुने भएका हुन् । एकस साता अघि मात्रै ती न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, बार पदाधिकारी तथा महान्यायाधीवक्तालाई भेटेर निरन्तरता दिन अपील गरेका थिए । म्याद थप्ने संवैधानिक प्रावधान नभएकै कारण परिषद बैठकमा म ... बाँकी अंश»
मधेसी नेताले भारत गुहार्नु गलत
२०७२ मङ्सिर २५ शुक्रबार, भक्तपुर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर राणाले मधेस आन्दोलनको समस्या लिएर मधेसकेन्द्रित नेताले भारत गुहार्नु गलत भएको बताउनुभएको छ । रफत सञ्चार क्लबले आज यहाँ आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले मधेसको समस्या समाधान भारतसँग नभई नेपालमै खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेता राणाले भारतीय विदेशमन्त्रीले नेपालका मामलामा कूटनीतिक मर्यादाभन्दा बाहिर गएर बोल्ने गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो । ... बाँकी अंश»
भारतीय वन विभागद्वारा दशगजा मिचेर बाँध बनाउँदै
२०७२ मङ्सिर २५ शुक्रबार, पुनर्वास (कञ्चनपुर), । नेपालको सहमतिबिनै पुनर्वासको परासनस्थित नेपाल–भारत दशगजालाई मिचेर भारतीय वन विभागले माटो थुपारी तीन मिटर अग्लो आली बनाउन सुरु गरेको छ । परासनको बीचफाँटास्थित नेपाल–भारत सीमा स्तम्भ नं १९१ देखि १९४ सम्म करिब तीन किमी लम्बाइको माटो बाँध बनाउन सुरु गरिएको छ । दशगजा क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउँदा भारतीय पक्षले नेपाली पक्षसँग सहमति गर्नुपर्ने हो सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले बनाइरहेका बाँधजस्तो द ... बाँकी अंश»